YAANYADA BEERAHA: KALASHADIISU WAA MID ADAG, EE GASACADAHA KA HOOSEYSA BIYAHA, QUMMANAAN AAN CAADI AHAYN, LABA JIBBAAR, DHIRBAAXO, CAGAARKA CAGAARAN, FILIMKA HOOSTIISA, DUUDDUUBAN, OO LEH MIRAHA QALALAN EE YAANYADA - BEER CAGAARAN
Hababka loo beerto ee yaanyada: xoqan iyo mustardar, wata iyo khiyaano, iyo kuwo kale oo badan
Tamaandhada waxay ku noolyihiin meel caan ah oo ku jirta cuntadeena maalinlaha ah, iyo, shaki la'aan, dad badan ayaa la yaabi kara sida aad gurigaaga ugu korin karto.
Ma aha in qof kastaa fursad u helo inuu kobciyo yaanyada guriga habka caadiga ah. Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan uga hadli doonaa siyaabaha gaarka ah ee loo beero yaanyada.
Waxaan si faahfaahsan u soo bandhigi doonaa sidii ay u kobcin lahaayeen yaanyada filimka hoostiisa, sideratah, oo ah shaar balsed ah, iyo sidoo kale isticmaalaya khariidad gaar ah.
Beerto waxaa lagu sameeyaa aqalka dhirta lagu koriyo., ka hor taariikhda abuurka ugu muhiimsan ee bannaanka u furan.
Faa'iidooyinka: awooda lagu isticmaalo noocyo leh xilli dheer oo soo kabasho ah xagaaga qabow.
Dhibaatooyinka: ma aha in qof kastaa fursad u leeyahay inuu dhigo aqalka dhirta lagu koriyo.
Geedo beerto ayaa isla markiiba noqon kara, heerkulka loo baahan yahay.
Qallafsan - isku dhafan ama isfaham
Nuxurka habkan wuxuu ka kooban yahay beer abuur badan oo cufan ah ama geedo. (sida magacu tilmaamayo), yareeynta booska u dhexeeya dhirta waxaa badanaa loo arkaa qalad, sababtoo ah oo leh qoyaan aan ku filnayn (taas oo ah inay tahay mid aad u daran, sababtoo ah tirada dhirta halkii qayboodba waa ka badan tahay), dhalidda bacrimintu waxay noqon doontaa wax ka yar.
Faa'iidooyinka: waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho waxsoosaar dheeraad ah qaybta cutubka.
kakanaanta ururka ee hawada (gaar ahaan ku yaal aqalka dhirta lagu koriyo) iyo daryeel, sababtoo ah dhirta ayaa ku yaal meel u dhow midba midka kale;
waxa dhici karta in uu cudurku kaco, marka la barbardhigo beero badan oo dhif ah.
Sidee loo abuuraa isafgarad? Tani Habka uu ka duwan yahay beeritaanka caadiga ah ee tamaandhada, waa in la gooyaa oo keliya in la abuuro abuur ama geedo ku dhow midba midka kale (in ka badan 5 dhirta halkii sq.m.).
Beeri beerashada qallalan
Yaanyada Beeraha geedo ku yaal geedo waxaa lagu sameeyaa by abuurka oo aan barareyso.
Faa'iidooyinka: sahlanaanta habka, xitaa ku habboon kuwa bilowga ah.
Dhibaatooyinka:geedo ayaa soo muuqan doona ka dib marka la isticmaalo abuurka abuuray.
Si aad u dardar geliso abuurka miraha, isla markiiba ka dib markii aad beerto waxaad u baahan tahay inaad waraabiso.
Waxa lagama maarmaan ah in lagu beero abuurka qoyan, 1-2 cm, oo si khafiif ah ugu rusheeyo carrada, si ay miraha u helaan qorax ku filan, si ay u dhaqso u dhaqso. Iyadoo la raacayo xaaladahan, waxaad sugi kartaa sprouts 5-10 maalmood.
Fiidiyowgu wuxuu soo bandhigayaa hab lagu beero tamaandhada oo leh abuur qallalan:
Dhirta laballaban - 2 xabbo hal god
Beerto laba dhirta hal dalool.
dhirro dheeraad ah iyo dhalid dheeraad ah halkii cutub;
on dhirta laba, miro inta badan koraan weyn.
Dhibaatooyinka: manjooyin badan oo waqti-qaadashada mass cagaaran dheeraad ah.
Beerto waxaa lagula talinayaa in la sameeyo geedo. Iyadoo laga beerto dhirta keli ah, ma jiro faraq farsamo, iyada oo la raacayo shuruudo isku mid ah, laba dhirta waa in lagu dhex beeray hal dalool.
Waxaan ku soo bandhigeynaa fiidiyowga ku saabsan waxa yaanyada beerto siinaya 2 qaybood hal dalool:
Sida loo dhigo filimka "sariirta diiran"?
Waxa loogu yeero "sariirta kuleylka" - aqalka dhirta lagu sameeyo oo laga sameeyo filim ku wareegsan xoqan, si wanaagsan ayey u saameeyaan koritaanka tamaandhada.
goosashada horay uga soo kabatay beerta furan;
saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo ee filimku wuxuu u oggol yahay dhaqanka thermophilic inuu u adkeysto xitaa dhaxan yar.
Dhibaatooyinka: hawo wanaagsan ayaa lagama maarmaan ah, haddii kale dhirta weerarka gadaashiisa.
Waa wax aan loo baahnayn in la yareeyo yaanyada dhowr jeer isla meeshaas - tani waxay kordhisaa khatarta ah in la sameeyo duufaan dambe.
Geedo Weekly waxaa lagu beeray ceelasha ee beerta, pre-waraabiyo.
Ka dibna Bacriminta (ash) waxaa lagu shubay midigta hoosta.
Marka xigta, filimku wuu fidsan yahay.
Siderats waa dhirro u shaqeynaya sidii bacriminta dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee yaanyada, iyo kobcinta ciidda leh arrinta organic.
Dhibcaha ayaa kuu oggolaanaya inaad kordhisid tirada cagaarka si aad u dhaqso badan, sababtoo ah waxay ururiyaan nitrogen baahi loo qabo yaanyada;
cagaarka cagaaran waxay leeyihiin saameyn xooggan marka loo eego Bacriminta kiimikada;
xididdada sideratov dhoobo qashin.
Dhibaatooyinka: la'aanta nidaam mideysan oo loogu talagalay xulashada digada cagaaran ee kala duwan ee yaanyada.
Hooska ugu fiican waa garoon cad, vetch, facelium, alfalfa, lupine.
Digniin. Beerto dhowr dalag oo isku mar ah ayaa kordhin doona waxtarkooda.
Meelaha cagaaran ayaa la beeray inta lagu jiro xilliga xagaaga, laakiin way miirayaan ka hor inta aanay ubaxin. (waqtigaan iyaga ku jira ugu muhiimsan ee nafaqooyinka), si aad u samayso qolka yaanyada.
On video aad ka heli kartaa aqoon u leh habka beerto yaanyada ee digada cagaaran:
Xoqidda godadka dhulka
Beeralayda waxay ku talinayaan in ay beerto tamaandhooyin ku dhexjiraan si ay dhirta u helaan qoyaan ku filan oo horumariya.
dhalidda ugu badan ee dhirta ay soo saari karto;
Itimaalka hooseeya ee qalajinta ciidda.
Dhibaatooyinka: kakanaanta qashin qubeyska.
Daraasadaha leh qoto dheer oo ku saabsan 25 cm yihiin waraabiyo iyo geedo waxaa lagu beeray ciid qoyan si qoto dheer ah. Ka dib marka la buuxiyo godadka oo dhan, waxaa ka buuxsameysa xagga sare ee cawska qashinka ah.
In substrate ah
Goobidda u dhaxeysa lakabyada maaddo dabacsan oo lagu soo rogay faleebo ayaa loo yaqaan 'dabayl' ama 'shell'.
Meelaha badbaadinta, taas oo fududeynaya in ay korniiyaan guriga yaanyo;
Looma baahna in badan oo dhul ah;
awoodda dib-u-isticmaalka waxyaabaha ka hooseysa "dabayl".
Dhibaatooyinka: baahida loo qabo in la sameeyo xulasho gaar ah oo taxadar leh ee wax lagu beero.
Xayawaanka waxaa inta badan loo isticmaalaa laminate substrate, laakiin waxaad isticmaali kartaa cellophane.
15 sentimitir oo dherer ah ayaa lagu dhajiyaa dusha sare, waraaqda musqusha waxaa lagu dhajiyaa, oo dhulka wuxuu kudhow yahay ilaa 1 cm qaro weyn.
Waa qoyaan ka soo jejebiye, iyo masaafada 10-15 cm waxaa la dhigaa abuurka abuurka, iyo xargaha ayaa si tartiib ah u barbaaray.
Isku duubka waxaa lagu dhejiyaa xargaha kabadhada, bacda balaastigana waxaa la geliyaa dusha sare si ay u abuurto saamiga aqalka dhirta lagu koriyo.
Ka dibna ku rid weel qumbaha, halka hoose ee lakabka khafiifka ah ee biyaha lagu shubo.
Habkani wuxuu u kordhiyaa geedka xaaladaha dabiiciga ah, natiijada, wuxuu u baahan yahay dadaal yar oo qof.
geedo u muuqda waqtiga ugu fiican ee dhirta;
oo dhan jiilaalka, miraha "adag tahay", isagoo ku jira qoyaan ku filan;
fursad ay ku sameeyaan iyada oo aan ladhi Karin.
Dhibaatooyinka: way adag tahay in la saadaaliyo wakhtiga soo degitaanka.
Tan iyo dayrta, yaanyo badan oo xoog leh ayaa la doortaa oo lagu meeleeyaa lafaha compost, si khafiif ah ku rusheeyey on top iyaga oo daboolay laamood. Guga, sida ugu dhakhsaha badan barafka dhalaalayaa, waxay bilaabi doonaan sii kordhaya.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyo ku saabsan sida loo beero yaanyada ka hor xilliga qaboobaha:
Hab fudud oo loogu talagalay dadka aan doonayn in ay ku beeri dhirta dhul furan.
goosashada midda badan leh;
waqti go'an dhakhso ah.
Dhibaatooyinka: naadir u ah dufanka wanaagsan ee weelasha dhalada, sidaas darteed waxa fiican in la isticmaalo dhalooyinka caaga ah.
Weelku wuxuu ka buuxsamaa ciidda iyo humus (waxaa ka wanaagsan in godadka hoose laga dhigo qoyaanka si loo sii daayo qoyaan xad dhaaf ah), geedo halkaas u fariisto, iyo daryeel dheeraad ah ma aha mid ka duwan daryeellidda yaanyada dhulka ama koriyo.
Waxay la mid tahay habka loo dego ee digada cagaaran.
la'aanta Bacriminta kiimikada.
Dhibaatooyinka: Waa wax aan loo baahnayn in lagu daro noocyo kala duwan oo yaanyo ah.
Mustard waxaa lagu beeray guga hore iyo midhaha ka hor inta beerto yaanyada. Cabbiraadda cagaaran ee siderata waxaa loo isticmaali karaa bacriminta si toos ah loogu beeray yaanyada.
Kobcinta yaanyada kor u kaca waa hab aan caadi aheyn oo asal ah oo beerto.
Looma baahna in lagu xoojiyo dhirta meel qumman oo xirxiran;
dhirta waxay helaan iftiin badan waxayna soo saaraan dhalid dheeraad ah.
dhirta ayaa weli u muuqda inay kor u kacayaan;
ma aha mid ku habboon dhammaan noocyada.
In weel caag ah leh daloolka hoose, hagaajin geedka leh xididdada ilaa, ku daadi dhulka iyo ku shub si aad u badan si ay biyo u soo maraan qaab dhismeedka oo dhan.
Laga soo bilaabo fiidiyowga waxaad baran doontaa sida loo beero yaanyada habka toosan:
Habka uma baahna waraabin caadi ah, dhammaan qoyaanka waxaa laga soo saaraa dharka.
Faa'iidooyinka: qiyaasta ugu wanaagsan ee biyaha loogu baahan yahay dhirta.
Dhibaatooyinka: Suufka suufka ahi wuu sii dari karaa, sidaa daraadeed waxa fiican in la isticmaalo qalabka.
In taangiga beeritaanka waa inuu ahaadaa dalool kaas oo xadhiggu dhex marayo.
Dheecaan korka ku shubay.
Lakabka birta ah ayaa lagu shubay.
Xagga sare u dhig khariidado dhowr ah.
Next, geedka waxaa la beeray.
Qaybta soo jiidashada ee xayawaanka ayaa biyo ku qoyan.
Iyada oo lagu diiriyo in vermiculite
Beeraha abuurka Vermiculite ayaa helaya caan. Daawadani waxaa loo yaqaan Vermisil.
Faa'iidooyinka: abuurka way kala baxdaa 3-4 maalmood oo ka sarreysa kuwa qalalan.
Dhibaatooyinka: Markaad isticmaasho biyaha adag, waxaa jira feejignaan sareeya in pH ay u wareegto dhinaca alkaline
Vermiculite waxaa lagu buuxiyaa biyo kulul iyo miraha ayaa lagu qooyay, kadibna waxaa lagu beeray sida caadiga ah.
Beeraya geedo yaanyo ah oo la isticmaalayo hydrogen peroxide
Ka qallajinta abuurka ee hydrogen peroxide ka hor intaan la beeri lahayn sifo caafimaad - miraha waa la nadiifiyaa, difaacidooda waxay kordhisaa.
Dhibaatooyinka: Marka loo isticmaalo kiimikooyinka kale, waxaa dhici karta in falceliska aan loo baahnayn.
In peroxide-qooyay faashad ama dhar, miraha waxaa lagu qooyay maalin, ka dib markii ay la dhaqay, qalajiyey iyo beeray.
Eeg kalluunka geela, wax walba waxaa loo sameeyaa si la mid ah, kaliya dhulka aan loo isticmaalin, miraha waxaa si toos ah loogu dhigaa waraaqda musqusha.
Faa'iidooyinka: habka nadiifka ah marka la barbardhigo dabayl ka dhalatey dhul la'aanta.
Disadvantages: nidaamka xidid daciif ah ee dhirta horumaray.
Markaad dooranayso qaab kasta, xasuusnoow ugu horeyntii ugu fiican ee yaanyada waa karootada iyo basasha.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu kobcin karo yaanyada, qof walbana wuxuu dooran karaa waxa ay jecel yihiin iyo naftiisa iyo kuwa ay jecel yihiin iyagoo leh khudrad aad u weyn.